Xubnihii Maamulka Degmada Afgooye oo xilkii laga qaaday iyo Xubno cusub oo lagu badalay	« AYAAMO TV
Xubnihii Maamulka Degmada Afgooye oo xilkii laga qaaday iyo Xubno cusub oo lagu badalay
1747 Views Date March 28th, 2014 time 10:56 am
Wasiirka arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya C/llaahi Goodax Barre ayaa soo saaray wareegto uu xilalka uga qaaday masuuliyiintii degmada Afgooye, isagoo magacaabay masuuliyiin cusub.
Mas’uuliyiinta xilalka laga xayuubiyay waxaa ka mid ah, guddoomiyihii degmada Afgooye, C/llaahi Cabdi Axmed (Ibey), guddoomiye ku-xigeenkii dhinaca siyaasadda iyo nabadgelyada, Mahdi Axmed Xasan, xoghayaha dowladda hoose iyo xubno kale.
Wareegtada ayaa lagu sheegay in guddoomiyaha cusub ee degmada Afgooye loo magacaabay Xaaji Gaabow, ku-xigeenka degmada ayaa sidoo kale loo magacaabay Xuseen Jibriil, halka madaxa dowlada hoose loo magacaabay Cismaan Carab.
Xil ka qaadistan ayaa loo cuskaday qodobbo kala duwan oo ay ugu weyn tahay xagga amniga, iyadoo xubnaha xilalka laga qaaday la faray in xilalkooda ku wareejiyaan xubnaha cusub ee la magacaabay.
Degmada Afgooye ayaa tan iyo markii lagala wareegay Al-shabaab dhowr sano ka hor waxaa ka taagnaa xaalado amaan daro oo aad u daran, kuwasoo maamulkii la bedelay uu ku fashilmay inuu wax ka qabto, lamana oga waxaa maamulka cusub uu ka bedeli doono karo xaalada degmadaas.